नेपालिले नै किन्न नसक्ने नेपालमा बनेको बाइक, कति छ नेपालमै बनेको बाईकको मुल्य ?
शनिबार, साउन ३०, २०७८ ७:०४
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। यात्रि मोटरसाइकिल्स, अपरेसन पछाडि आधिकारिक दिमाग, पहिलो नेपाली निर्मित इलेक्ट्रिक मोटरसाइकलमाविवरण खुलासा। कार्यक्रमले दुई यात्री उत्पादनहरू प्रदर्शन गर्यो: प्रोजेक्ट जीरो (P0) र प्रोजेक्ट वन (P1)। **यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु **
लगभगएक बर्ष पछि, यात्री मोटरसाइकलले मूल्य विवरण सहित प्रमुख विवरणहरू प्रकट गरेको छ! त्यसो भएपछि, हामीले यात्रिको अत्यधिक महत्वाकांक्षी उत्पादन: प्रोजेक्ट शून्यको द्रुत सिंहावलोकनको लागि पर्याप्तजानकारीहरू पाएका छौं। यात्री परियोजना शून्य विशिष्टता
यात्री परियोजना शून्य अवलोकन , डिजाईन – यात्री मोटरसाइकलले केही भिन्न, मौलिक र कल्पनाशील कुरा ल्याउँदैछ! “मोशन इन मोशन” दर्शनबाट प्रेरित, प्रोजेक्टजीरोले एक क्याफे रेसर डिजाइनलाई आधुनिक तत्वहरूको साथसाथै भविष्यको अनुभूति प्रदान गर्दछ।
स्टिलचेसिसको शीर्षमा कार्बन फाइबरको साथ मिश्रित, आगामी इलेक्ट्रिक टु–व्हीलर शहरी गतिशीलता पुन: उत्पन्न गर्नेतिनीहरूको लक्ष्यको तेस्रो पुनरावृत्ति हुनेछ।